Journey to the Center of the Earth (2008) | MM Movie Store
journey to the Center of the Earth (2008) သညျ IMDb 5.8/10 Common Sense Media 3/5 Metacritic 57% Google users 90% ရထားသော ဒါရိုကျတာ Eric Brevig က ရိုကျကူးထား၍ Michael D. Weiss, Jennifer Flackett တို့က ဇာတျလမျးဇာတျညှနျးရေးသားကာ
သရုပျဆောငျ Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem တို့ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားသော Action, Adventure, Family ဇာတျကားကောငျး တဈကားဖွဈတဲ့အတှကျ ခဈြခွငျးအားဖွငျ့ တငျဆကျလိုကျပါရစေ….
ပြောကျဆုံးနသေော အဈကိုကို ရှာရနျ တူတျောမောငျနှငျ့ လမျးပွတို့ကို ချေါကာ ကမ်ဘာရဲ့ အလယျဗဟိုရှိ အန်တရာယျမြားပွီး ထူးဆနျးလှတဲ့ ပြောကျဆုံးနတေဲ့ကမ်ဘာကို ရောကျသှားရာ ဘယျလို အကျရှငျစှနျ့စားခနျးတှေ တှရေ့မလဲ ဇာတျလမျးမှာ ဆကျလကျကွညျ့ရှုခံစားကွပါခငျဗြာ….
journey to the Center of the Earth (2008) သည် IMDb 5.8/10 Common Sense Media 3/5 Metacritic 57% Google users 90% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Eric Brevig က ရိုက်ကူးထား၍ Michael D. Weiss, Jennifer Flackett တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ
သရုပ်ဆောင် Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Family ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ….
ပျောက်ဆုံးနေသော အစ်ကိုကို ရှာရန် တူတော်မောင်နှင့် လမ်းပြတို့ကို ခေါ်ကာ ကမ္ဘာရဲ့ အလယ်ဗဟိုရှိ အန္တရာယ်များပြီး ထူးဆန်းလှတဲ့ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကမ္ဘာကို ရောက်သွားရာ ဘယ်လို အက်ရှင်စွန့်စားခန်းတွေ တွေ့ရမလဲ ဇာတ်လမ်းမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားကြပါခင်ဗျာ….